Indlu encinane e-Černá voda / iApartment / iRychlebské stezky
Černá Voda, Olomouc Region, Czechia
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguJana
Indlu yethu ibekwe kumbindi weentaba zeJeseníky, kufutshane nesiseko seendlela zaseRychbské. Ijikelezwe ngamadlelo kunye namahlathi, kwindawo eyimfihlo. Kukho iikwari kunye namadama okuqubha, amabhodlo enqaba, kunye nokuhamba okuhle kunokuthatyathwa kanye ukusuka emnyango. Ngeenyawo, ngebhayisekile, kwanangepram. I-Jeseník Spa iphezu kwenduli, abathandi benkcubeko baya kuxabisa iHolo yoMdaniso eRačí údolí okanye i-chateau yaseJavorník. Ngaba uyayithanda ikofu emnandi? Baya kukuvuyela ukukupheka e-Černá Voda, kwaye baya kunika i-pastries evela kwi-bakery yasekhaya. Sine-instagram @prochazkanalouce
I-cottage itholakala kwi-18,000 yeemitha ze-square zomhlaba wangasese kwaye ihlulwe ibe ngamacandelo amabini ahlukeneyo kwaye ahluke ngokupheleleyo. I-Apartment Přístavek isandula ukwakhiwa, iyilwe njengendawo enkulu enomoya evulekileyo enegumbi lokuhlambela elahlukileyo. Sifezekise umnqweno wethu wokuba sisondele kwindalo yendawo ngokunokwenzeka, kwaye sisebenzise iindawo ezinkulu ezikhazimlayo kunye nefestile yesiFrentshi, kunye nokufikelela ngokuthe ngqo kwi-terrace kunye negadi emva kwayo, ehlala kwiSihlomelo kuphela. Indlu inezifudumezi eziphantsi komhlaba, iheater yamanzi kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo. Inxalenye yesibini yindlu ye-cottage, kunye nomnyango ohlukeneyo, i-terrace kunye negadi.
Zombini ezi ndawo ziyilelwe ukubonelela abahlali bazo ngasese ngokupheleleyo, zahlulwe yinxalenye yoqoqosho lonke, zineendawo zazo ezingaphandle, kwaye nganye ijolise kwicala elahlukileyo.
Silawula i-cottage ngothando, kodwa eyona nto intle kakhulu yindawo engqongileyo. Ngaba ungathanda iingcebiso zokuba ungaya phi uhambo, isidlo sasemini, uhambo, ibhayisekile, ukutyibilika, okanye ikofu? Qhagamshelana nathi ngokuzithemba, siya kukuvuyela ukukucebisa, sineentandokazi ezininzi kwiminyaka echithwe kulo mmandla mhle.
Lonke ulwazi oluyimfuneko, inkcazo eneenkcukacha, kubandakanywa ingqokelela engundoqo, iya kunikwa ngaphambi kokufika kwakho. Sinikezela nge-cottage elungiselelwe ngokupheleleyo, kwiinyanga zasebusika siya kukukhukula kwangaphambili ukuba ufike ukufudumala.
Lonke ulwazi oluyimfuneko, inkcazo eneenkcukacha, kubandakanywa ingqokelela engundoqo, iya kunikwa ngaphambi kokufika kwakho. Sinikezela nge-cottage elungiselelwe ngokupheleleyo, k…